Trump oo saxiixay amar madaxweyne oo lagu mamnuucayo TikTok – Radio Damal
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxweyne oo lagu mamnuucayo shirkadda ay hoos tagto TikTok ee ByteDance oo waayahan ba eedeyn kala kulmeysay xukuumadda Washington.
Amarkan madaxweynaha ayaa dhigaya in Mareykanka “ay khasab tahay in tallaaba adag uu ka qaado milkiilayaasha shirkadda TikTok, si loo difaacao ammanaka qaranka Mareykanka”.
Dhaqangalka amarkan oo bilaabmaya 45 cisho gudahood ayaa sidoo kale dhigaya in la mamnuucayo shirkad walba oo Mareykanka ah oo iskaashi dhaqaale ama xiriirkale la yeelato ByteDance.
Aaladda baraha bulshada ee TikTok oo hore loogu eedeeyay inay u basaasto Dowladda Shiinaha oo uusan xiriir wanaagsan kala dhaxeynin Mareykanka ayaa beenisay eedeymaha loo jeediyay ee ahaa in bartaas ay maamuusho ama ay saami ku leedahay dowladda Shiinaha. Waxaa kale oo ay waxba kama jiraan ku tilmaameen in xogta khaaska ah ee daka isticmaala TikTok ay u gudbiso Xukuumadda Beijing.
Maalin kahor, madaxweyne Trump waxaa uu sidoo kale saxiixay amar kaas lamid ah oo lagu mamnuucayo shirkadda WeChat oo iyana laga leeyahay Shiinaha.
Aaladdan Wechat ayaa ah mid bulshada ay isticmaasho oo farriimaha la isugu diro.
Labada amar ee uu soo saaray madaxweynaha, waxaa uu ku sheegay “in tallaabooyin dheeraad ah ay khasab tahay in la qaado si wax looga qabto xaaladda degdeg ah, loona ixtiraamo macluumaadka iyo isgaarsiinta tiiknoljiyadda”.
Wuxuu intaa ku daray “in barnamijyada taleefoonada ee laga leeyahay dalka Shiinaha ee isticmaalkooda uu aadka ugu batay gudaha Mareykanka ay wali khatar ku yihiin ammanaka qaranka, siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha Mareykanka.”
Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale sheegay in xogta TikTok ay keydiiso ay dowladda Shiinaha u oggolaaneyso inay dabagal ku sameyso shaqaalaha Dowladda Mareykanka, ayna gacanta ku dhigaan xogta gaarka ah ee dadka.
Waxaa kale oo uu xusay in arrimo siyaasadeed loo adeegsaday bartan oo ay kamid tahay dibadbaxyadii Hong Kong iyo sida dowladda Shiinaha ay ula dhaqanto Muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uighurs.
Wasaradaha kala duwan ee Mareykanka oo ay kamid yihiin midda amniga, gaadiidka iyo ciidamada Mareykanka ayaa durbaba mamnuucay in TikTok lagu isticmaalo taleefoonada shaqada ee dowladda.
Shirkadda Tiknoljiyadda ee Microsoft ayaa maalma kahor sheegtay inay daneneyso inay iibsato isticmaalka TikTok ee qaaradda Amerika, haseyeeshee madaxweyne Trump ayaa sheegay in haddiba arrintaas ay dhaceyso ay tahay in dowladda Mareykanka ay wax ku yeelato.
Aaaladan oo ah barnamaij dhanka baraha bulshada oo dad garaaya 80 milyan oo Mareykan ah ay isticmaalaan ayaa caan ka noqotay meela badan oo dunida, waxaana inta badan aad u isticmaala dadka ay da’doodu ka yar tahay 20-ka sano.
Waxaa ay u isticmalaaan madadaalo, maad iyo waxyaaba kale oo ay kusoo duubaan muqaal 15 ilbiriqsi ah, waxaana uu leeyahay qaab sahlan oo qofka uu ku tifatiri karo waxwalba oo uu duubo.
Mareykanka oo keliya ma ahan ee sidoo kale waxaa jira dalal kale oo mamnuucay isticmaalka TikTok.
Dowladda Hindiya ayaa dalkeeda ka mamnuucday isticmaalka aaladda TikTok iyo barnaamijyo kale oo laga leeyahay dalka Shiinaha, kuwaas oo ay sheegtay in ay khatar ku yihiin dalkeeda.
War qoraal ah oo ka soo baxay Hindiya ayaa lagu sheegay “in barnaamijyadaas ay khatar ku yihiin madaxbanaanida dhuleed, sumcadda iyo ammaanka dalka Hindiya”.
Guud ahaan waxaa dalkaas laga mamnuucay 59 barnaamij ama App, waxaana kamid ah Wechat.
Arrintan ayaa waxay daba joogta xiisadda sii xureysa ee u dhaxeysa labada dal, kuwaas oo isku haya muran dhanka xuduudda. Labada dal ayaa ciidamo dheeraad ah geeyay xuduudda ay wadaagaan, gaar ahaan deegaanka Ladakh. Isku dhac dhexmaray labada dhinac ayaa waxaa ku dhintay 20 askari oo Hindi ah.